I-Little Moose Lodge: I-Single Queen (Igumbi 5 kwangu-7)
Indawo yokuhlala enobungani yomndeni enendawo yokudlela enhle esizeni! Itholakala enkabeni yedolobha elincane lase-Irwin, i-ID nemizuzu nje ukusuka eSouth Fork edumile emhlabeni wonke yomfula iSnake. Isigodi sethu sinikeza okuhlangenwe nakho phakathi nenkathi ngayinye yabathandi bangaphandle! Fly izinhlanzi, isikebhe, umshini weqhwa, ukuhamba ngezinyawo, ukushushuluza, ukuzingela, i-ATV, futhi ugibele amahhashi!
Siyatholakala ukusingatha imicimbi!
Itholakala amahora angu-1 ukuya kwangu-2 ukusuka e-Jackson Hole, e-Grand Teton nase-Yellowstone National Parks. Jabulela ukushayela kwakho ngokusebenzisa izintaba ezinhle kakhulu!
Igumbi #5: Indlovukazi Engashadile, ukugeza kwangasese okuneshawa/ubhavu, okuyize okuhlukene, i-microwave, umenzi wekhofi, itafula nezihlalo, i-TV, isiqandisi esincane, futhi sabelana ngendawo neretshurenti yethu yesitayela selogi. Leli gumbi lihlangana neGumbi lesi-4, indlovukazi eyodwa enokugeza.
Indawo yokudlela okwamanje ivulekele Isidlo sasemini nesakusihlwa ngo-12-8
Indawo yethu yokulala ebukekayo inamagumbi angu-7 esewonke atholakalayo ukuze uwabhuke futhi uwajabulele. Siyajabula ukukuqondisa kuwo wonke amathuba amahle okudala kabusha indawo yethu enhle engawanikeza yona.
I-Little Moose Lodge iyakwazi ukusingatha imicimbi yakho yomuntu siqu noma yebhizinisi endaweni yethu yokudlela yamalogi enhle. Sinezihlalo ezanele ngaphakathi endlini kanye nesitezi esihle sangaphandle esinezihlalo kanye nombono we-Baldy Mountain. Umgomo wethu uwukuhlinzeka ngolwazi olungcono kakhulu lwekhasimende ngesikhathi sokuvakasha kwakho. Kuwukuzibophezela kwethu ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezihlukile kusivakashi sethu ngasinye.
I-Little Moose Lodge inamagumbi alungele izilwane ezifuywayo atholakalayo ngedola elingu-$25.00 isilwane ngasinye/imali yobusuku ngabunye.
Wonke amagumbi e-Little Moose Lodge aku-https://www.airbnb.com/users/337609995/listings
Silandele kuFacebook @ LittleMooseLodgeIdaho
Amadolobha aseSwan Valley, Irwin kanye nePalisades ayingxenye yemiphakathi embalwa ehlala osebeni lweSouth Fork yoMfula iSnake. I-South Fork of the Snake River, okuhlanganisa ne-Henry's Fork, idume umhlaba wonke njengendawo ehamba phambili yokudoba impukane eyomile eNyakatho Melika.
Phuma ngomnyango wakho futhi uzothola iBig Hole Mountain Range enyakatho, izintaba zeCaribou eningizimu kanye nePalisades Range empumalanga, imibono emangalisayo ihambisana nemisebenzi yangaphandle yonyaka wonke yawo wonke umuntu emndenini.
Isigodi sethu esihle siyingxenye ye-Yellowstone ecosystem. Lesi simiso semvelo siyikhaya lama-elk, i-Rocky Mountain izimvu zophondo olukhulu, umsila omhlophe nezinyamazane zomnyuzi, i-moose, ibhere, amabhubesi asezintabeni nezimbuzi zasezintabeni. Amadada, ama-sand cranes, ama-osprey, ama-bald and gold eagle, nezinye izinhlobo eziningi zezinyoni zinikeza ukubuka okuthakazelisayo kochwepheshe bezinyoni nababukela izinyoni abayizimfundamakhwela.
Sinezinsizakalo ezimbili zomhlahlandlela wokudoba wendawo kanye nempahla yokugibela umzila wokuzingela / wamahhashi imizuzu nje ukusuka!
Sicela ungene endaweni yokudlela i-Little Moose Lodge. Amahora okudlela ango-11:00 am - 9:00 pm izinsuku eziyi-7 ngesonto. Sicela usazise kusengaphambili uma uzongena ngemva kuka-8:30 pm.
Umphathi wethu uhlala imizuzu embalwa nje phansi komgwaqo futhi ushayela ucingo nganoma yisiphi isimo esiphuthumayo ongase ube naso.
Sicela usishayele uma ungathanda ukubhukha ngosuku olufanayo ngemva kuka-9:00 pm. Inombolo yethu yocingo ingatholakala ekhasini lethu le-Facebook @littlemooselodgeidaho
Sicela ungene endaweni yokudlela i-Little Moose Lodge. Amahora okudlela ango-11:00 am - 9:00 pm izinsuku eziyi-7 ngesonto. Sicela usazise kusengaphambili uma uzongena ngemva kuka-8…